September 20, 2021 - Celegroup
လူအများစု သတိမထားမိတဲ့ ညဘက် မီးဖွင့်အိပ်ခြင်းရဲ့ အန္တရာယ် (၅)ခု
September 20, 2021 Celegroup1975 0
လူအများစု သတိမထားမိတဲ့ ညဘက် မီးဖွင့်အိပ်ခြင်းရဲ့ အန္တရာယ် (၅) ခုမီးဖွင့်ပြီးအိပ်တာနဲ့ မီးပိတ်ပြီး အိပ်တာရဲ့ကြားမှာ ကွာခြားချက်တော့ ရှိပါတယ်။ ငယ်ငယ်ကတော့ မီးဖွင့်ပြီး အိပ်တာကိုမှ သဘောကျပါလိမ့်မယ်။ မီးဖွင့်အိပ်တဲ့အခါ သရဲ မလာနိုင်တော့ဘူး ဆိုတာမျိုး..။ဒါပေမယ့် မီးဖွင့်အိပ်တဲ့အခါ နောက်ကွယ်မှာ ဆိုးကျိုးတွေ ရှိနေပါတယ်။ ၁။ မျိုးပွားကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေခြင်း.. ညဘက်မှာ မီးဖွင့်အိပ်ခြင်းကြောင့် အမျိုးသမီးတွေမှာ မျိုးမပွားနိုင်တော့တဲ့အထိ ဖြစ်နိုင်ကြောင်း လေ့လာချက် တစ်ခုမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ကြွက်လေးတွေကို […]
ပုံမှန် ဝင်ငွေရှိပြီး လက်ထဲမှာ ပိုက်ဆံ မစုမိသူများ အတွက် ဒါလေးတွေ လုပ်လိုက်ပါ အိုကေသွားလိမ့်မယ်နော်…
ပုံမှန် ဝင်ငွေရှိပြီး လက်ထဲမှာ ပိုက်ဆံ မစုမိသူများ အတွက် ဒါလေတွေ လုပ်လိုက်ပါ အိုကေသွားလိမ့်မယ်နော် ပုံမှန် ဝင်ငွေရှိပြီး လက်ထဲမှာ ပိုက်ဆံ မစုမိသူများ အတွက် ပိုက်ဆံ စုတယ် ဆိုတာ ရည်မှန်းချက် တစ်ခု ထားပြီး ရေရှည် တည်ဆောက် ထားသင့်တဲ့ အလေ့အကျင့် တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်… ။ ငွေကြေး အောင်မြင်မှုမှာ ပိုက်ဆံ ဘယ်လောက် ဝင်တယ် ဆိုတာထက် ဘယ်လောက် စုနိုင်တယ် […]
ေခါင္းစဥ္ၾကည့္ၿပီး တမ်ိဳးမထင္နဲ႔အုံး အအိုျဖစ္သြားတဲ့သူေတြဖတ္ရင္ ရင္ထုမနာျဖစ္မွာစိုးလို႔ေနာ္အပ်ိဳစစ္စစ္ဆိုတာက ခုေခတ္က ၁၆ ႏွစ္၁၇ႏွစ္ဆိုရင္ကို ရည္းစားက ရွိေနၾကတာ ။ ရည္းစားျဖစ္တာ ၁ ရက္မၾကာဘူး living together က ေနေနၾကၿပီေလတကယ္ေတာ့ လက္မထပ္ရေသးပဲနဲ႔အတူတူေနၾကတာ မိန္းခေလးတစ္ေယာက္အတြက္ လုံးဝတန္ဖိုးက်သြားပါၿပီအပ်ိဳစင္ ဘဝဆိုတာ ေယာက်ၤားတိုင္းရဲ႕ တန္ဖိုးထားျခင္းကို ခံထားရသူလို႔ေတာင္ တင္စားထားၾကပါတယ္။ အပ်ိဳစင္ကေန အအို ျဖစ္ဖို႔က ၅မိနစ္မၾကာပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ အအိုကေန အပ်ိဳ ျပန္ျဖစ္ဖို႔က ရွိသမွ် စည္းစိမ္း […]
ထူးဆန်းသော အိပ်မက် (၁၂) မျိုးရဲ့ နိမိတ်များ ၁။ သွားကျိုးတယ်လို့ အိပ်မက်မက်ရင် လူပုံ အလယ်မှာ အရှက်တကွဲ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အချစ်ရေးမှာလည်း ပဋိပက္ခလေးတွေ ဖြစ်တတ်တယ်။ အိမ်ထောင်သည် အမျိုးသမီးတွေ သွားကျိုးတယ် လို့ အိပ်မက်မက်ရင် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရမယ့် နိမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ၂။ အမြင့်ကနေ ပြုတ်ကျတယ်လို့ မက်ရင် အချစ်ရေးနဲ့ လုပ်ငန်းကိစ္စတွေမှာ ထူးဆန်းတာတွေ ကြုံရတော့မယ်ဆိုတဲ့ နိမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းနဲ့ ပတ်သက်ရင် ပြဿနာဖြစ်နိုင်ပြီး အချစ်ရေးနဲ့ […]
အမေက ပြောဖူးတဲ့ ခွေးသေပုပ်ကို ခြေထောက်နဲ့ မကန်မိစေနဲ့ဆိုတဲ့ စကားလေးပါ။ တခုခုဆိုရင် ဆတ်ဆတ်ထိ မခံတတ်တဲ့ အကျင့် ကျွန်မမှာ ရှိခဲ့တယ်။ ကိုယ်ကမှန်တယ် ထင်ရင် ပြောဆိုရဲသလို ၊ မှားတယ် ထင်ရင်လည်း တောင်းပန်ရဲတာ ကျွန်မရဲ့အကျင့် ။ ကိုယ်ကမှန်လို့ ပြောပြီ ဆိုရင် ဘယ်သူ့ရဲ့ မျက်နှာမှ မကြည့်တတ်ခဲ့ဘူး။ အရိုင်းအစိုင်း တစ်ယောက်လိုပဲ ဖြစ်ခဲ့ဖူးတယ်။ မဟုတ်မခံတဲ့ အာ့စိတ်လေးကို မသိစိတ်က သဘောကျမိလေ.. ကျွန်မစိတ်က […]
“မီးဖိုခြောငျပနျးကနျဆေးသည့ျနရောကလူသတျသမား”. Steel Wool အကွောငျးမြှဝလေိုကျပွီဗြာ “မီးဖိုခြောငျပနျးကနျဆေးသည့ျနရောကလူသတျသမား”. Steel Wool အကွောငျးမြှဝလေိုကျပွီဗြာ လှနျခဲ့တဲ့ခွောကျနှဈလောကျက ကြှနျတော့ျမိတျဆှတေဈယောကျနဲ့ဆုံဖွဈပါတယျ ။ အိပျယာထဲကမထနိုငျသလိုအစားအသောကျပါမစားနိုငျတဲ့အတှကျ လူတဈကိုယျလုံးက အရိုးပေါျအရတေငျနပေါပွီ ။ သူခံစားနရေတဲ့ဝဒေနာကိုမေးကွည့ျတော့ ခကြျနားက စူးအောင့ျပွီး နာနသေလို ဝမျးလဲခြုပျနပေါတယျ ။ဆေးခနျးပွတော့လဲပိုးသတျဆေးနဲ့ အကိုကျအခဲပြောကျဆေးတှပေဲပေးသတဲ့ ။ ဖွဈနိုငျခွကေို ကြှနျတောျစဉျးစားကွည့ျပါတယျ..အစာအိမျမှာအနာရှိသလား..အူခေါကျသလား..အူကငျဆာလားပေါ့ ။ စိတျထဲမှာမသငျ်ကာလာတာနဲ့ မမေေ့တပည့ျ ခှဲစိတျဆရာဝနျကွီးဆီကို အကွံဉာဏျတောငျးခံခဲ့ပါတယျ ။ ဆရာဝနျကွီးက […]
အိမ်သာတက်တိုင်း ဖုန်းယူသွားတတ်သူများ သတိပြုနိုင်စေဖို့ ဘယ်သူမှ ရောဂါ တစ်မျိုးမျိုးကို ဖြစ်ချင်ပါတယ်လို့ တောင့်တကြမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ် အနာရောဂါ ကင်းကင်း နဲ့ ဘဝမှာ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် နေချင်ကြ မှာပါ။မလွှဲမရှောင်သာ တဲ့ အခြေအနေမှ သာ ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီး က ရောဂါတွေ ကို လက်ခံရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအထဲမှာ မလွှဲမသွေ ဆိုရင်တောင် လုံးဝ မဖြစ်ချင်ကြ တဲ့ ရောဂါတွေ ရှိပါတယ်။တစ်ချို့က လိင်ပိုင်း […]
အသက်(၂၀)အရွယ်မှာ ဒီအရာတွေ စွန့်လွှတ်လိုက်မယ်ဆိုရင် အောင်မြင်ဖို့အတွက်ဖြစ်လာမယ် အောင်မြင်ကျော်ကြားတဲ့ သူတွေရဲ့နောက်ကွယ်မှာ ခါးသီးတဲ့ စည်းကမ်းတွေရှိပါတယ်။ ဖြစ်ချင်တာထက် ဖြစ်သင့်တာကို ဦးစားပေးပြီး ဆန္ဒကို သိက္ခာနဲ့ ထိန်းသိမ်းတတ်တဲ့သူတွေ၊ စိတ်ကူးအိပ်မက် ကြီးကြီးမားမား ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သူတွေဟာ တစ်ချိန်မှာတော့ တကယ့်ကို လျှမ်းလျှမ်းတောက် အောင်မြင်တဲ့သူတွေ ဖြစ်လာပါတော့တယ်။ အခုဖော်ပြပေးမှာကတော့ ကိုယ်ဝါသနာပါရာလိုင်းတွေမှာ အမြင့်ဆုံးသောအောင်မြင်မှုတွေ ရချင်တဲ့သူတွေအတွက် ၂၀ ကျော်အရွယ်ကနေ စတင်ပြုပြင်သင့်တဲ့ အချက်လေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကြီးမားတဲ့စိတ်ကူးတွေ၊ အိပ်မက်တွေရှိတဲ့ လူငယ်တွေအတွက် တကယ်ကို ဖတ်သင့်တဲ့ဆောင်းပါးလေးတစ်ပုဒ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ […]
လူတိုင်းလူတိုင်းမှာ သူ့ဘဝဇာတ်လမ်းနဲ့သူ ရှိတယ်
အသက်၂၄ နှစ်အရွယ် လူငယ်လေးက ရထားပြတင်းပေါက်ကနေ အပြင်ကို လှမ်းကြည့်လိုက်ပြီး “ဖေဖေ..ဖေ‌ဖေ” သစ် ပင်တွေကို ကြည့်ပါဦး၊ အားလုံးနောက်မှာ ကျန်နေခဲ့ကြ တယ်လို့ တအံ့တဩ ပြောလိုက်ပါတယ်။ အဖေဖြစ်သူက သူ့သားကို ကရုဏာသက်စွာ ကြည့်လိုက် ပြီး စကားတစ်ခွန်းမျှ မပြောဘဲ ပြုံးလျက်သာနေလိုက် တယ်။ ဒီမြင်ကွင်းကို သူတို့ရဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာ ထိုင်နေ တဲ့ စုံတွဲတစ်တွဲက တွေ့မြင်သွားပြီး နားမလည်နိုင်တဲ့ အကြည့်နဲ့ စိုက်ကြည့်နေခဲ့ပါတယ်။ ခဏကြာတော့ […]
တစ်ခါတုန်းကပေါ့.. ကံကို အားကိုတဲ့ ငါးရယ် ၊ ဉာဏ်ကို အားကိုးတဲ့ ငါးရယ် ၊ ဝီရိယကို အားကိုးတဲ့ ငါးလေး သုံးကောင် ရှိခဲ့တယ် ။ တစ်နေ့တော့သူတို့သုံးကောင် ပင်လယ်ထဲမှာ ပျော်မြူးရင်းနဲ့ တံငါသည်ရဲ့ ပိုက်ကွန်ထဲကို တိုးဝင်မိပြီး တံငါရဲ့ လှေပေါ်ကို ရောက်သွားခဲ့ ပါတယ် ။ ကံ ကို အားကိုးတဲ့ ငါးလေးပြောတာက.. ” တကယ်လိုကွာ ငါသာ သေဖို့ကံ ပါမလာခဲ့ဘူး […]